RASMI: Atletico Madrid Oo Barcelona & Griezmann Ku Ciil Baxday, Wakiilka Pogba Ee Mino Raiola Oo Afka Furtay, Xaalada Neymar& De Ligt Iyo Xogtii Ugu Danbaysay Ee Suuqa Kala Iibsiga. - Gool24.Net
RASMI: Atletico Madrid Oo Barcelona & Griezmann Ku Ciil Baxday, Wakiilka Pogba Ee Mino Raiola Oo Afka Furtay, Xaalada Neymar& De Ligt Iyo Xogtii Ugu Danbaysay Ee Suuqa Kala Iibsiga.
Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ayaa maalintii shanaad si rasmi ah u furan waxaana jiray ciyaartoy badan oo lala kala wareegay iyada oo maanta ay jireen heshiisyo kubbada cagta muhiim u ah oo la dhamaystiray iyo waliba go’aano saamayn leh oo la sameeyay.
Shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo koobaysa heshiisyadii ugu muhiimsanaa ee maanta oo Jimce ah la dhamaystiray halkan ayaanad kaga bogan kartaa.
Halkan kaga bogo Heshiisyadii maanta oo jimce ah lagu dhawaaqay iyo heshiisyada dhaw ee la filayo in ay la dhamaystiri doono.
RASMI: Manchester United ayaa heshiis cusub ka saxiixatay Axel Tuanzebe wuxuuna qalinka ku duugay qandaraas cusub oo Old Trafford ku sii hayn doona ilaa sanadka 2022 waxaana heshiiskiisa lagu daray hal sano oo dheeraad ah oo doorasho ah.
Ole Gunnar Solskjær ayaa saxaafada kala soo muuqday Tuanzebe isaga oo ka mid noqday liiska ciyaartoyda uu Solskjaer doonayo in uu waqti dheer sii joogo United.
RASMI: Dhinaca kale Man United ayaa isna heshiis cusub oo dhawti dheer ah ku abaal marisay Andreas Pereira wuxuuna saxiixay heshiis cusub oo oo Manchester United ku sii hayn doona ilaa June 30 2023.
RASMI: Kooxda Kompany macalinka u yahay ee Anderlecht ayaa si rasmi ah u dhamaystirtay saxiixa xidigii hore ee Man City iyo Arsenal ee Samir Nasri oo ay si xor ah kula wareegtay iyada oo Kompany iyo Nasri ay markale midoobeen.
RASMI: Difaacii kooxda Real Madrid ee Sergio Reguilón ayaa heshiis amaah ah ugu wareegay kooxda Sevilla wuxuuna saxiixay heshiis kooxda Sevilla uu amaah ahaan ugula joogo doono ilaa June 30,2020 .Sergio Reguilón oo boos joogto ah xili ciyaareedkii dhamaaday ka haystay Madrid ayaa markii uu Zidane soo laabtay ay rajadiisii Madrid soo dhamaatay.
RASMI: Kooxda Real Madrid ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay da’yarkii kooxdeeda ee Martin Odegaard uu heshiis amaah ah ugu biiray kooxda La Liga ka dhisan ee Real Sociedad wuxuuna amaahdan Sociedad ku joogi doonaa ilaa June 30,2020
RASMI: Barcelona ayaa ugu danbayn si rasmi ah u dhamaystirtay heshiiskii ay Frenkie De Jong bishii January la gaadhay waxayna Blaugrana xidiga reer Holland ka bixisay 75 milyan gini isaga oo ka gudbay tijaabada caafimaadka isla markaana qalinka ku duugay heshiis waqti dheer Camp Nou ku sii hayn doona waxaana shir jaraa’id la qabtay madax wayne Bartomeu.
Frenkie de Jong introduces himself to the Barcelona fans in style 😏pic.twitter.com/wB5j8u8wj1
RASMI: Chelsea ayaa amaah ku dirtay xidiga garabka ee Charly Musonda wuxuuna da’yarkan amaah xili ciyaareedkii labaad ah uu ugu biiray kooxda Vitesse.
RASMI: Kadib markii Frank Lampard si rasmi ah loogu magacaabay tababaraha cusub ee kooxda Chelsea, Derby County oo ah kooxdii uu Lampard maamulayay ayaa markeeda si rasmi ah ugu dhawaaqday in Phillip Cocu uu noqday badalka tooska ah ee Lampard.
RASMI: Kooxda Paris Saint-Germain ayaa si rasmi ah u dhamaystirtay heshiiska xidigii kooxda Sevilla ee Pablo Sarabia kaas oo saxiixay hesiis kooxda PSG ku hayn doono ilaa June 30,2024 wuxuuna qaatay No.19.
RASMI: Madax waynaha Barcelona ee Bartomeu ayaa xaqiijiyay in goolhayihii hore ee Victor Valdes uu kooxda ku soo laabanayo isaga oo shaqo loo dhiibi doono.
Bartomeu ayaa yidhi: “Waxan la hadlay Victor Valdes, waxaanu ku faraxsanahay in isagu uu guriga ku soo laabanayo, maalmaha soo socda ayaynu eegi doonaa booska aanu isaga u soo bandhigayno”.
RASMI: Kooxda Juventus ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay kooxda Sassuolo kala soo wareegtay Merih Demiral waxayna ka soo bixisay €18 milyan gini isaga oo saxiixay heshiis shan sanadood ah.